IStudio Conzatti 1. Indawo egqwesileyo kunye noyilo •
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAbraham
Ngokwenene, Live Oaxaca!
Kufuphi nezona ndawo zibalulekileyo zabakhenkethi kwikomkhulu, ezona ndawo zibalulekileyo zepaki zoluntu, iindawo zokutyela, iivenkile, njl.
Yonwabela indawo ehlakaniphile, ekhululekile, epholileyo enendawo engenakubethwa. Ingaphakathi licwangciswe ngokugqibeleleyo, lilungiselelwe ukuhlala okusebenzayo kunye nenkonzo yobuqu eya kuhamba kunye nokuhlala kwakho ngokweemfuno zakho. I-Cable TV, i-intanethi ye-5G, ikhitshi kunye neenkcukacha zoyilo eziya kwenza ukuba ukuhlala kwakho kuhluke ...
Isanda kulungiswa kwaye ixhotyiselwe intuthuzelo yakho.
Phambi kwe studio umthi omhle usigubungele osinika ubutsha, umncinci kodwa nazo zonke iinkonzo zokwenza ukuhlala kwakho kube mnandi ngakumbi.
Indawo inegumbi lokulala elineebhedi ezimbini, igumbi lokuhlambela labucala, ikhitshi elinezixhobo, igumbi lesidlo sakusasa kunye negumbi lokutyela, indawo yokufunda.
I-HDTV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-Netflix, I-Amazon Prime Video
4.82 · Izimvo eziyi-107
Le ndlu ibekwe kwindawo esemantla yeziko lembali, ibhloko enye esuka kwiGadi yaseConzatti, iibhloko ezimbini ukusuka kwiLlano Park, imizuzu emihlanu ukusuka kwiCawa yaseSanto Domingo kunye neNdwendwe yabaKhenketho, kukho indawo yokutyela engaphantsi kwendlu ekhonza isidlo sakusasa. , amashwamshwam kunye nekofu elungileyo. Endleleni eya Santo Domingo uya kuza ngapha emarikeni eziphilayo kunye nokutya Oaxacan "La Cosecha" ilondoloza lula, inkonzo lokuhlamba, nemivalo, cafes, iindawo zokutyela, izithuthi zikawonke-wonke ukuya nayiphi na inxalenye yalo mzi, masimu kunye iziza zembali, iirenti ibhayisekile yaye ICafé Punto Paz ekunika uhambiso lwasekhaya iintsuku ezingama-365 ngonyaka, konke oku ngeenyawo.
Ukufumaneka okuphezulu ukuphendula imibuzo yakho okanye ukujongana naso nasiphi na isiganeko ngokukhawuleza. Ndihlala iibhloko ezimbini kude kwaye ndine-cafe 4 iibhloko kude, ngendlela ikofu ikhethekileyo kwaye imnandi (ndihlala ndishiya iigram ezimbalwa ekhitshini ukuze ujabulele).
Ukufumaneka okuphezulu ukuphendula imibuzo yakho okanye ukujongana naso nasiphi na isiganeko ngokukhawuleza. Ndihlala iibhloko ezimbini kude kwaye ndine-cafe 4 iibhloko kude, ngend…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Oaxaca de Juárez